Waqtiga Akhriska: 12 daqiiqo(Last Updated On: 10/07/2020)
app lacagtaWaxaan dhawaan ku qoray blog ah oo ku saabsan Fuushan la kids on tareen markaasuu idin siiyey qaar ka mid ah talooyin loogu talagalay ilaalinta yaryarkiinna aad marti qaaday. Akhriska buugaagta, ciyaaro Uno iyo dhegaysiga buugaag hubaal waa waajib qof kasta, laakiin waxaa jira kumbuyuutarro barnaamijyo ah oo la soo dejinayo ka hor intaadan u safrin halkaas oo aan aaminsanahay inaysan ku madaddaalin doonin oo keliya laakiin ay kaa caawin doonto inaad sameyso safarkaaga dheeraad ah oo abaabulan oo xiiso leh! From Store App si ay Google Play, waxaana ilaa qaar ka mid ah ugu wanaagsan ee lagu soo koobay 23 Apps Waxaad u Baahan Tahay Si Download Ka hor safarka. All aad u baahan tahay waa casriga ah iyo mararka qaar ka hor safarka soo socda.
Haddii ay tahay sharci ee magaalada aad booqashada ama ma, Airbnb waa magaca qoyska. Tani waxay xaqiiqdii waa mid ka mid ah Apps aad u baahan tahay si ay u download hor safarka. dalabyo app ka fog qiimaha jaban, iyo waayo-aragnimo dheeraad ah oo dhab ah by jidaynayey isticmaala in tiirka la maxalliga ah, ama ay guriga. app ayaa sidoo kale waxay bixisaa a feature yeedhay Saffarada, oo bixisa Waaya-aragnimada uu ka soo xusho inta aad joogto. Waxaan hubnaa ma noqon doonto dheer ilaa ay bixisaa wax walba oo aad u baahan tahay in mid ka mid ah go, laakiin hadda, fursadaha ay bixiyaan waa xaqiiqo ah oo qiimihiisu u soo degsado.
Haddii aad u safraya Europe oo dhan, waxaa jira fursad wanaagsan aad doonaa jidka aad ku sameyn tareen. gaadiidka dadweynaha fursadaha in Europe waxaa caan ku tahay links cross-dalka, iyo halka duulimaad dhakhso yihiin, Tareenada badan yihiin haboon, oo intaa ka badan, iyo adeeg badan oo wadooyinka ka badan. Haddii ay dhacdo in aad tahay in baahida loo qabo tigidhada tareenka, download Save A tareenka app si ay u raqiis ah wax iibsiga oo sahlan.
La dhoofidda saaxiibo? Great! Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud waayo, wax si aad u hesho sirgaxan waa haddii aadan kala qaybsan tahay lacagta safarka aad si sax ah. Iska ilaali isku dhaca iyo sida loo isticmaalo taleefanka gacanta si aad u kharashyada si fudud u kala dhexeeya saaxiibo. Haddii aad qabto koox ka mid ah, tani waa mid ka mid ah barnaamijyadooda aad u baahan tahay si ay u download hor safarka. Splittr si gaar ah waxaa loogu talagalay dadka u safraya. Ku qor kharashaadka on go ah, oo ay ku jiraan kuwa ka bixisay waxa iyo app samayn doonaa intiisa kale.
Haddii aad tahay nin socoto ah habdhiska, mid ka mid ah Barnaamijyada Aad U Baahan Tahay Inaad Soo Dejiso Ka Hor Intaadan Safrin Waa Xasilooni, waa barnaamij kuu noqon doona saaxiibkaaga ugu fiican. Tani qalab safarka ku anfacaya ayaa xamuulka ee meditations kala duwan ee walaaca, is-dabacsan, neefsashada oo dheeraad ah. Waxaa sidoo kale dalabyo dabacsan dhawaaqa inuu kaa caawiyo inaad nasato. Sida a carabka ku soo baxay socotada qudhaydu, Xasillooni ayaa iga caawisaa in aan sii, si fiican u, is deji wadada.
Qoraalka ee joornaal duq-dugsiga laga cabsado. Laakiin wax ku saabsan warqad ka dhigan tahay in aad halis u ah waxa laga badiyay, gaar ahaan marka aad booqanaya dalal badan. Mid kale oo ka mid ah barnaamijyada aad soo dejiso ka hor safarkaagu waa livetrekker.com. Journal marti si aad u eegi kartaa dib safar aad on map la wada qabanayo. app wuxuu kuu raadka sida aad u tagto, sixitaanka line cas oo ay la socdaan map a on wadada saxda ah aad qaadato; app ayaa sidoo kale kormeero aad xawaaraha iyo sare, taas oo weyn oo loogu talagalay dadka safarka u quudhin. Ku dar images, video, audio iyo qoraalka jidka, abuurista qorka safarka multimedia aad la wadaagi karto! Free, macruufka iyo Android, livetrekker.com
TripIt waa app ah statistics safarka caawiya abaabulo macluumaadkaaga oo dhan hal meel ah. From jaale diyaarad si Boos hotel, TripIt qabanqaabisaa wax kasta oo fudud loo akhrin faahfaahin in aad ku hayaa on track. Ama si toos ah app ka link xisaab-aad, ama hore oo dhan email xaqiijinta, iyo TripIt samayn doonaa intiisa kale. Available on desktop, Android ama Apple iPhone, waxaad awoodi doontaa inaad u isticmaasho meel kasta oo adduunka ah.
Haddii aad horay aadan u app this on your phone, aad u hesho. Inkastoo North America ayaa inta badan seegay app mobile xogta ku salaysan ku, WhatsApp waa dunida oo dhan loogu isticmaalo fariimaha, wicitaanada video calls iyo cod. Its caan waa sida in ganacsatada ugu dibada shaqeeyaan tiro WhatsApp ah ee intaa dheer in ay ama xitaa Sidaa awgeed, telefoon lambar caadiga ah. Nagu kalsoonow markaan dhahno waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso WhatsApp.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta? Riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/apps-download-traveling/- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)